सुनैसुनको पहाड भेटियो! खन्दै, माटो पखाल्दै, सुन निकाल्दै (भिडियो हेर्नुस्) « Gaunbeshi
सुनैसुनको पहाड भेटियो! खन्दै, माटो पखाल्दै, सुन निकाल्दै (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं। ठूलो पहाडमा सुनैसुन भरिएको छ भन्ने खबर फैलियो भने के होला रु सुनजस्तो बहुमूल्य धातु पाउन त्यहाँ मानिसहरुको भीड अवश्यक लाग्छ । यस्तै सुनैसुनले भरिएको पहाड भेटिएपछि सुन खन्नको लागि स्थानीयको भीड लागेको भिडियो पछिल्लो समय भाइरल भइरहेको छ ।
यस्ता छन् हिन्दूधर्म शास्त्रनुसार राशीअनुसारको इष्टदेव र उनलाई प्रसन्न गर्ने मन्त्र
काठमाण्डौ,जेठ २३ । हरेक व्यक्तिले सुखी जीवनका लागि धन प्राप्ति गर्न मेहनत गरिरहेको हुन्छ ।